यस्तो छ ‘रिभेन्ट’को फष्टलुक – bampijhyala.com
Home > समाचार > चलचित्र > यस्तो छ ‘रिभेन्ट’को फष्टलुक
२६ चैत्र २०७७, बिहीबार १४:४२ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । फिल्म ‘रिभेन्ट’को फष्ट लुक पोस्टर सार्वजनिक भएको छ । डिएस डिजिटल सिनेमाको ब्यानरमा मोहन गमालको प्रस्तुति तथा अमन कुमार देवको निर्माण रहेका फिल्मको लेखन निर्देशक शंकर अधिकारी घायलले गरेका हुन् ।
फष्टलुकमा फिल्मको थिम समेटिएको निर्देशक घिमिरेले बताए । फिल्ममा खगेन्द्र घिमिरे, रोशन बिसी, विशाल अग्रवाल, रविन श्री, प्रीतिका शर्मा, रेनु थापा, माया चाहर, पदम सुनार, आर जे भिलेनको मुख्य अभिनय रहेको छ ।
सिएल शर्मा, निर्देशक अधिकारी, राजु लामा तथा पूर्ण सापकोटाको संगीत रहेको फिल्ममा फिल्ममा कृष्ण पाण्डेको छायाँकन, राजन महर्जनको नृत्य, देव महर्जनको द्वन्द्व छ । फिल्मलाई अगामी बर्षको असारमा प्रदर्शन गर्ने योजना रहेको निर्माण युनिटले जनाएको छ ।
तामाकोशी गाउँपालीकामा कोरोना संक्रमण तिब्र, आज बेलुका ५ बजे देखि ८ गते बेलुका ५ बजेसम्म शहरे शिल २६ चैत्र २०७७, बिहीबार १४:४२
सम्झनामा जेठ ३ २६ चैत्र २०७७, बिहीबार १४:४२
शरीरमा अक्सिजनको कमी हुँदा किन घोप्टो परेर सत्नुपर्छ ? २६ चैत्र २०७७, बिहीबार १४:४२
माओवादी केन्द्र कस्तो बनाउने ? प्रचण्डले मागे सुझाव २६ चैत्र २०७७, बिहीबार १४:४२
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक २६ चैत्र २०७७, बिहीबार १४:४२